Olee otú Naghachi ehichapụ Videos si Nexus 7
> Resource> Video> Olee naghachi ehichapụ Videos si Nexus 7
Nso nso a, Google ka a mara ọkwa na Android 4.4 KitKat ga-kụrụ niile Nexus 7 nwe na n'ọdịnihu dị nso. Ugbua n'ihi na nke a update? Unu na-echeta na nkwado ndabere na mpaghara niile data na gị Nexus 7 tupu upgrading, ma ọ bụ ị ga-a obere na-ewe iwe maka adịkwa mkpa data. Tupu KitKat si abịa, ka okwu banyere ọzọ isiokwu mbụ: otú naghachi ehichapụ vidiyo si na a Nexus 7.
Ekwe omume nke Nexus 7 video mgbake
Na-emekarị, videos-echekwara na SD kaadị ma ọ bụ esịtidem kaadị ebe nchekwa n'ime Nexus 7. Mgbe ị ihichapụ a video, naanị ohere ọ na-ewe na kaadị na-akara dị ka reusable. Nke ahụ bụ na-ekwu, i nwere ike na-echekwa ọhụrụ data na ohere iji dochie ehichapụ video. Ozugbo ehichapụ video na-anọchi, ọ n'ezie kpamkpam ruo mgbe ebighị ebi. Ị nwekwara ike na-ekwu ya na-ehichapụ video bụ naanị-apụghị ịhụ anya tupu ọ bụ dekwasịzie ma na ị nwere oké ohere naghachi ya.
Olee otú naghachi ehichapụ vidiyo si na a Nexus 7
N'adịghị ka ihichapụ a video na kọmputa gị, ị nwere ike ghara weghachi ya na egweri biini ma ọ bụ ahịhịa mgbe ị chọrọ undelete ya. Naghachi vidiyo si na a Nexus 7, ị chọrọ iji nweta a Nexus 7 video mgbake ngwá ọrụ. Unu nwere otu? Ị nwere ike m nkwanye ebe a: Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery), ụwa mbụ Android data mgbake software niile gam akporo ọrụ. Ọ na-ekwe ka ị na-naghachi ehichapụ videos, photos, ozi, kọntaktị, music na akwụkwọ si nza nke Android igwe na mbadamba.
Download ikpe mbipute n'okpuru nwere a na-agbalị mbụ.
Cheta na: N'ihi na ndị ọzọ Android ngwaọrụ ọrụ, ị nwere ike na-ele ndepụta nke na-akwado na ngwaọrụ na Android ebe a.
Nke mbụ niile, ka ego otú nke a Nexus 7 video mgbake software anya dị ka:
Kwadebe ọrụ: Tupu ị malite agbake furu efu videos si Nexus 7, i kwesịrị nwee USB debugging ngwaọrụ gị.
Ọ bụrụ na gị Nexus 7 na-agba ọsọ Android 3.0 Android 4.1, ị nwere ike ịtọ ya na otú a: Ntọala <Mmepụta nhọrọ <Lelee USB debugging. Ọ bụrụ na ọ na-agba ọsọ Android 4.2 ma ọ bụ mgbe e mesịrị, ọ bụ obere mgbagwoju anya: Ntọala <Banyere ekwentị <Kpatụ Mee nọmba ruo ọtụtụ ugboro ruo mgbe na-a dee Ị bụ n'okpuru Mmepụta mod <Back to Ntọala <Mmepụta nhọrọ <Lelee USB debugging.
Wee soro nzọụkwụ n'okpuru iji weghachite ehichapụ videos si Nexus 7.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị Nexus 7 na ike iṅomi ya
Mgbe enyere USB debugging, jide n'aka na batrị nke gị Nexus 7 bụ karịa 20%. Mgbe ahụ na-agba ọsọ omume na jikọọ gị Nexus 7 na kọmputa. Mgbe ị na-ahụ window n'okpuru, pịa Malite bọtịnụ na-amalite ịgụ isiokwu gị Nexus 7 maka ehichapụ videos na ya.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị gbanyere mkpọrọgwụ gị Nexus 7, a ga-enwe ndetu na ngwaọrụ gị na ihuenyo na mkpa ka ị "Ka" ọ n'oge iṅomi. Mgbe ahụ azụ gị na kọmputa na-anọgide na scanning.
Nzọụkwụ 2. Tulee na-agbake videos si gị Nexus 7
Doppler ga-ewe gị a obere mgbe. Mgbe ọ na-agwụ, ị nwere ike ịlele niile recoverable videos ke Video udi. Ị nwere ike tinye akà rà dum Atiya na-agbake ha niile gị na kọmputa, ma ọ bụ i nwere ike selectively ịhọrọ ihe ị chọrọ na-agbake ha. Dị nnọọ họrọ ụzọ-amasị gị.
Download ikpe mbipute n'okpuru maka free inwe a na-agbalị ugbu a!
Olee otú Naghachi Photos si Nexus 7
$ 380 Nde ma ọ bụ $ 52 Nde? Olee otú Ọtụtụ Samsung ẹsiode Apple
Nexus 4 Android 4.4 KitKat Abịawo - Mgbe Ọ Ga-adị njikere maka Nexus 7?
Top 10 Ndepụta Okwu Onye kere Software
Olee otú mbubata na Export Videos na Adobe Premiere
Olee otú mpikota onu Videos na Sorenson Media piakota 9
20 Bara Uru Keyboard Uzo mkpirisi maka uchu Media andiwet
VirtualDub maka Mac: Easily Dezie Video na Mac
Olee otú Download Online Videos
MPlayer vs VLC- Kedu onye dị mma?
Olee otú Record Online Olu na ala